I-Apple iyasilela ukulibazisa ukuphunyezwa kwamanye amasango entlawulo kwi-App Store | Iindaba ze-iPhone
UIgnacio Sala | 11/11/2021 12:00 | Ivenkile yosetyenziso, Ukhuphiswano
Nangona iziphumo zetyala phakathi kwe-Apple kunye neMidlalo ye-Epic yayithandeka ngakumbi kwi-Apple kune-Epic, ijaji ephethe eli tyala, uYvonne González Rogers, wayalela i-Apple ukuba ivumele abaphuhlisi. sebenzisa amanye amasango entlawulo, idibanisa ikhonkco kwizicelo.
Ijaji inike umhla obekiweyo de kube ngumhla wesithoba kuDisemba. UApple uzamile ukulibazisa loo mhla, kodwa ijaji ithe hayi, ukuba i-Apple kufuneka iyithobele kwaye kufuneka ikwenze oko ngaphambi komhla obekiweyo kwaye uvumele abaphuhlisi ukuba bongeze amaqhosha, amakhonkco angaphandle ukuqondisa abasebenzisi kwiiplatifti zokuhlawula umntu wesithathu.
Igqwetha lika-Apple uMark Perry uxelele iVerge ukuba:
Oku kuya kuba ngowokuqala ukuba i-Apple ivumele ikhonkco ngqo kwisicelo somxholo wedijithali. Kuya kuthatha iinyanga ukusombulula iingxaki zobunjineli, ezemali, ishishini kunye nezinye.
Intsonkothe ​​kakhulu. Kufuneka kubekho izikhokelo zokukhusela abantwana, ukukhusela abaphuhlisi, ukukhusela abathengi, ukukhusela i-Apple. Kwaye kufuneka zibhalwe kwizikhokelo ezinokuchazwa kwaye zisetyenziswe.
UGary Bornstein, igqwetha le-Epic Games, uthi isicelo sika-Apple senzelwe ukuba ukulibaziseka kokuphunyezwa yesigqibo sejaji iminyaka emininzi ephawula ukuba "i-Apple ayenzi nto ngaphandle kokuba inyanzelekile."
UYvonne González, ijaji yetyala, uye waphikisana nesigqibo sokungasithatheli ingqalelo isicelo sika-Apple echaza ukuba:
Ngamafutshane, isindululo sika-Apple sisekelwe kufundo olukhethiweyo lweziphumo zeNkundla kwaye azihoyi zonke iziphumo ezifunyanisiweyo ezixhasa umyalelo wenkundla, oko kukuthi, ukuziphatha okukhoyo kokungathembeki, kuqukwa nemilinganiselo yekhomishini ekhokelela kwimida yokusebenza ephezulu ngokugqithisileyo kwaye engadityaniswanga nexabiso. yepropathi yobukrelekrele bakho.
Oku kuqalisa kokuziphatha kokungathembeki kusisiphumo, ngokuyinxenye, semigaqo-nkqubo echasene nokukhuphisana i-Apple efake isicelo sokwenzakaliswa kokhuphiswano. Ngenxa yoko, isindululo sinempazamo.
Ngaphaya koko, nokuba ixesha elongezelelweyo beligunyaziswe ukuthobela imfuno enyiniweyo, i-Apple ayizange icele ixesha elongezelelweyo ngaphezulu kweentsuku ezilishumi ukubhena kwesi sigwebo. Ngoko ke, iNkundla ayikuthatheli ngqalelo ukhetho lwexesha elongeziweyo, ngaphandle kweentsuku ezilishumi eziceliweyo.
Ukongeza, ikwatsho ukuba i-Apple ayikhange ibonise ukuba olu tshintsho lumele a bonakalisa intshabalalo kwiApp Store:
Abathengi baqhelene kakhulu nokunxibelelana ukusuka kwi-app ukuya kwisikhangeli sewebhu. Ngaphandle kokufuna ixesha lokuseka izikhokelo, i-Apple ayinikanga sizathu sibambekayo sokuba iNkundla ikholelwe ukuba lo myalelo unokubangela bonakalisa intshabalalo kwivenkile
Amakhonkco anokuvavanywa ngoPhononongo lwe-App. Abasebenzisi banokuvula iiphequluli kwaye bachwetheze kwakhona amakhonkco anesiphumo esifanayo; kukuphazamiseka nje, okusebenzayo kuphela kuncedo lwe-Apple.
Umgca osezantsi: I-Apple kufuneka ivumele abaphuhlisi yongeza amakhonkco kumasango akho okuhlawula ukusuka nge-9 kaDisemba. Mhlawumbi, abokuqala ukuhlaziya izicelo zabo ziya kuba yiSpotify kunye neNetflix, ezimbini zeenkampani eziye zathi kwiminyaka edlulileyo zaphelisa ithuba lokufumana isivumelwano seenkonzo zabo ngokusebenzisa izicelo ze-iOS.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Ukhuphiswano » I-Apple ayikwazi ukulibazisa ukuphunyezwa kwamanye amasango entlawulo kwi-App Store
ISpotify ngoku isivumela ukuba sithintele abanye abasebenzisi ngonaphakade
iCloud yeWindows ihlaziywe ukuxhasa iividiyo zeAppe ProRes kunye neefoto kwiApple ProRaw